abukar – www.cisaleey.com
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali khayre oo la kulmay Macalin Maxamuud.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali khayre ayaa hoyga uu ka deganyahay magaalada Dhuusameeb ee xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug waxaa uu kula kulmay Hoggaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud. Kulankooda ayey kaga wada hadleen dhammeystirka dhismaha...
Ciidamada Dowladda oo la wareegay deegaanno ka tirsan gobolka Sh hoose.
Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan Guutada DANAB kala wareegeen Al-shabaab deegaanno dhowr ah. Deegaannada ciidamada dowladda Soomaaliya ay kala wareegeen Al-shabaab ayaa...
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Filish oo dhagax dhigay xarun degmada Warta Nabada.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta dhagax dhiggay xarunta degmada Warta Nabadda. Xarunta degmada ayaa waxaa bishii May ee sanadkii hore 2019 qarax ka geysteen...
Trump “Iima muuqato inaan dagaal la galeyno Iran”
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaysan u muuqan in Mareykanka uu dagaal la geli doono Iran, kadib markii dibad-baxayaal taageersan Iran ay isku dayeen inay ku xoomaan safaaradda Mareykanka ee Baghdad. “Uma...
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay ka xuntahay qoraal kasoo baxay ICRC iyo SRCS.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay war ku aadan weerarkii sabtidii ka dhacay Ex-Control Afgooye 28-kii December, oo kasoo baxay hay’adaha Bisha Cas iyo Laan qeyrta Cas (ICRC &...
Dowladda Maraykanka oo ka digay weeraro argigixiso oo loola bartilmaameesado diyaaraadaha isticmaala hawada Kenya.
Maamulka Duulista hawada ee dowladda Maraykanka ayaa ka digay in kooxaha xagjiriinta aay bartilmaameesan karaan diyaaradaha isticmaala hawada bariga Afrika. Diyaaradaha duulimaadyada rayidka ah iyo dhamaan hawlwadeenada diyaaradaha ka diiwaangashan Mareykanka ayaa...
Carwada wax soo saarka Somaliland oo maanta la furay.
Magalada Hargeysa waxa maanta laga furay carwadda wax soo saarka warshadaha waddaniga ah ee Somaliland, iyadoo ay ka qaybgaleen madax sare oo ka socota dalka Itoobiya. Furitaan Carwadan ayaa sidoo kale ka...
Biyo la’aan ka jirta xerada Dhadhaab.
Saddex maalmood ayey xaalad biyo la’an ah ku sugan yihiin in ka badan 2,000 kun oo qoys oo ku nool xerada qaxootiga ee Dhagaxley ee ka tirsan xeryaha Dhadhaab kadib markii ay...
Madaxweyne Eriteriya Afwerki oo gaaray Addis-Ababa.
Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa maanta gaaray magaalada Addis-Ababa, halkaasi oo uu ra’iisul wasaaraha Itoobiya kula yeelanayo kulankii ugu horreeyey tan iyo markii uu abaal-marinta nabadda ee Nobel Peace Prize ku helay...
Mashruuc biyo xireen ah oo laga dhagax dhigay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Maamulka Gobolka Hiiraan, Guddiga Somaliland ee gurmadka Fatahaadda iyo kan gobolka Hiiraan ayaa maanta si wadajir ah u dhagax dhiggay mashruuc biyo xireen ah oo bilow u noqonaya qorshe ballaaran oo la...